सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ब्रोकर कमिसन घट्यो, हेर्नुस् अब कति लाग्छ ? – सुनाखरी न्युज
सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ब्रोकर कमिसन घट्यो, हेर्नुस् अब कति लाग्छ ?
Posted on: December 25, 2020 - 5:58 pm
सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ब्रोकर कमिसन घटेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको कमिसन घटाएको हो ।बोर्डले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यसअघि लाग्दै आएको कमिसनमा ३३ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशत घटाएको हो ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क घटाइएको सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति